Ndine makore 35, handina kumboroorwa | Kwayedza
Ndine makore 35, handina kumboroorwa
25 Jun, 2015 - 00:06	 2015-06-25T16:39:41+00:00 2015-06-25T00:00:49+00:00 0 Views
NDAKAZOMUWANA wandaida, makaita basa veKwayedza uye rambai makadaro. Vose vachiri kufona pa0775 214 848 chiregai nekuti zvangu zvakaita.
Ndine makore 35, handina kumboroorwa uye ndiri kutsvagawo murume asina chirwere anoda kuita mhuri. Ndiri muHarare mandinoshanda, nhare yangu 0772 551 712.
Ndiri mudzimai ane makore 23 nemwana 1 ndinotsvagawo murume ane makore 26 kusvika 34 anoda zvemba. Ndinoshanda mumba, ndinoda ari pachokwadi asi mhondi kwete. Anoda ngaafone pa0782 193 992.
Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana vaviri ndotsvagawo murume ane makore 37 zvichidzika. Ane rudo rwepamwoyo achinamata chechi yePentacost ngaandibate pa0775 889 179.
Ndiri madzibaba ane makore 33 ndinodawo mudzimai akanaka, akasimba ari pachokwadi uye anonamata Mwari. Ndiri HIV positive, andidawo nhare yangu 0779 199 482.
Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1 ndotsvagawo murume ane makore 25 -30 ane mwana uye anoenda kuchechi. Ndobatika pa0783 190 596.
Ndiri mudzimai ane mwana 1, HIV positive uye ndiri kutsvaga murume anoda zvemba anoshanda. Ndiri muHarare, anoda nezvangu anondibata pa0777 059 280.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvaga shamwari (penpals) varume kana vakadzi. Nhare yangu 0774 970 123.
Makadii? Ndiri murume ane makore 44 ndoda mukadzi ane makore 20 kusvika 43 ane mwana kana asina uye anoda kuroorwa. Nhare yangu 0772 512 708.
Makadini veKwayedza. Ini ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvakawo musikana anoda zveimba ane makore ari pasi pe25. Ndinobatika pa0027 616 974 672.
Ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana mumwe chete, ndiri kudawo murume anondiroora asina chirwere seni. Ndifonerei pa0783 829 278.
Ndiri musikana ane makore 19 ndiri kutsvagawo shamwarikomana ine makore 25 zvichidzika kusvika 20. Ndobatika pa0783 432 150.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 28 ndotsvagawo mukadzi anoshanda anoda zvemba, ane rudo uye anonamata. Ndinoshanda samakanika, vandifarira ndibatei pa0775 887 951.
Ndiri murume ane makore 35 nevana vaviri ndinotsvaga mudzimai wekuroora anonamata ane makore 33 zvichidzika. Ndinoda anogara kudunhu reMashonaland West kana Harare. Ndinoshanda vanoda kutaura neni ndibatei pa0773 982 111.
Makadini henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 okuberekwa ndiri kutsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika ari pachokwadi. Asina chirwere ngaandibate pa0772 327 781.
Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana 2, HIV positive uye ndotsvagawo murume ane makore 34 – 40 ari zvandiri ane vana 2 kana 3. Anonzwisisa, achigara zvakanaka ngaandibate pa0776 315 038.
Makasimba here veKwayedza? Ndinotsvagawo murume wekuwanana naye, ndine makore 25 nevana 2 uye ndiri HIV positive. Ndinodawo murume anoshanda ari pachokwadi. Andifarira ngaandibate pa0771 461 614.
Ini ndiri murume ane makore 37 ndodawo mukadzi ari pachokwadi ane mhuri yake. Ndiri muHarare, nhare yangu 0777 777 752.
Rambai makadaro veKwayedza nechirongwa cheTishamwaridzane pamwe ndichawana wangu. Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Ndiri HIV negative, andifarira ndibatei pa0716 723 121.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 25 nemwana mumwe uye ndinotsvaga mudzimai ane makore 20-22 ane mwana wake mumwe ari mugari wemudhorodha reRusape. Vanotamba kwete, ndinoshanda ndibatei pa0783 784 115.
Ndiri musikana ane makore 28 ndotsvagawo murume ari pachokwadi akazvipira kuongororwa ropa. Anotya Mwari ngaafone pa0783 344 247.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana vaviri uye ndinoenda kubasa. Ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi anoda zvekuroora. Andifarira ngaandibate pa0775 933 421.
Ndiri murume ane makore 34 ndinodawo mudzimai ane makore 27 kusvika 33 ane mwana wake sezvo ini ndiine wangu. Andifarira ngaafone pa0733 176 240.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 29 ndinotsvagawo murume ane makore 40-45 anoda kundiroora. Ngaave akamboroora asina mukadzi uye ane mwana 1 kana 2 chete. Anotya Mwari anoenda kuchechi dzechipositori, dzesabata kunyanya dzengoma. Ndinoda mugari weHarare, ari Samanyika. Akasununguka nhare yangu 0775 776 801.
Makadii? Ndiri musikana anofamba newhiricheya, ndinodawo murume ane makore 33 – 45 ane rudo, anoratidzika uye asina chirwere seni. Anoda ngaandibate pa0773 941 393.
Makadii? Ndinodawo musikana ane makore 29 zvichidzika ari pachokwadi asi parizvino handisi kushanda. Anoda anondibata pa0771 090 934.
Ndiri musikana ane makore 24 ndinotsvaka mukomana ari pachokwadi anoda Mwari ane makore 34 kusvika 25. Anondibata pa0782 975 647.
Ndiri murume ane makore 36, handina mukadzi kana mwana ndogara muHarare kana paine andifarira ngaafone pa0716 615 369.
Ndiri mudzimai ane makore 40 ndinotsvaga murume ane makore 44 zvichikwira. Anoda ngaandibate pa0736 521 807 asi ndinoda anoshanda.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika anoda zvemba. Ari pachokwadi asigadi zvechipfambi ngaandibate pa0776 217 910.
Ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi ane makore 22 zvichidzika. Ndiri mukomana ane makore 19. Anoda ngaandibate pa 0776 883 090.
Makadii veKwayedza? Pamberi nekugona basa! Ini ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndotsvakawo musikana wekushamwaridzana naye kusvikira pakuroorana ane makore ari pasi pe20 akazvipira kunotorwa ropa uye anotyawo Mwari. Anoda ngaandibate pa0776 263 602 asi mvana kwete.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 18 nemwana 1 uye ndinotsvakawo mukomana ane makore 21 kusvika 25. Ndinoda anoshanda nekuti ndakanakisa, andifarira ngaandibate pa0771 172 302.
Ndiri mukadzi ane makore 45 ndinotsvagawo murume ane makore 47 kusvika 55 asina mukadzi. Andifarira ngaafone pa0737 314 569.
Ini ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo shamwai (penpals). Anoda ngaandibate kana kutumira sms pa0773 803 104.
Ndinotsvagawo shamwari yechisikana, ini ndiri mukomana ane makore 28. Nhare yangu 0774 120 511.
Ndiri kutsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi ane makore 38 – 44 ari HIV negative. Nhare yangu 0776 066 097.
Ndiri murume ane makore 42 ndinoita basa rekutengesa uye ndiri HIV positive. Ndinodawo mukadzi wekumisa naye imba ane vana kana asina. Nhare yangu 0782 808 963.
Ndiri madzibaba ane makore 44 ndinotsvaga madzimai vari kuda zvokuroorwa vakavimbika. Vanoda ngavandibate pa0774 074 117.
Ndiri murume ane makore 36, HIV negative uye ndakazvipira kunoongororwa ropa. Ndinodawo mudzmai wekuvaka naye musha ane makore ari pakati pe22 kusvika 28 .Ndine vana vatatu, angade kutaura neni nhare yangu 0771 489 764.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 21 kusvika 23 anoenda kubasa nekuti ini ndinoshandawo. Ngaave ari HIV negative, ari mushava. Ini ndiri mutsvuku, nhare yangu 0777 076 149.
Makadiiko zvenyu? Ini ndiri mukadzi ane mwana 1 ndinotsvagawo murume wekuroorana naye ari pachokwadi ane makore 28 kusvika 30 akazvipira kuongororwa ropa. Ngaave ane mwana 1 kana 2, ndinogara muHarare. Nhare yangu 0778 545 646.
Ndiri murume ane makore 45, handina mwana uye ndiri HIV negative. Ndinoda mukadzi ane zvaanoita pakurarama kwake ane makore anogumira pa47. Ndinobatika pa0778 298 436.
Ndiri murume ane makore 36 ndodawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi kwete zvekutamba.
Anoda ngaandibate pa0773 484 459, ndinoshanda.